11kii Ciyaaryahan Ee Ugu Fiicnaa Isbuucaan Horyaalada Yurub (European Team of the Week) - jornalizem
11kii Ciyaaryahan Ee Ugu Fiicnaa Isbuucaan Horyaalada Yurub (European Team of the Week)
Shirkada dhiraan dhirisa ciyaaraha kubada cagta ee Opta ayaa indhaha soo marisay isbuucaan horyaalada yurub, waxaana ay soo saareen 11ka ciyaaryahan ee ugu fiicnaa dhan walba.
Magac lama filaan ah oo ku jira line-upka waa goolhayaha West Ham Jussi Jaaskelainen, kaasoo qeyb weyn ka qaatay guushii 3-0 ee ay kooxdiisa ka gaartay Fulham.
Weeraryahanka AC Milan Giampaolo Pazzini iyo geesiga Manchester United ee guuldarada ka badbaadiyay Robin van Persie ayaana hogaaminaya dhanka weerarka iyadoo labada ciyaaryahanba ay dhaliyeen seddexleey isbuucaan.
Qiimeynta kooxda isbuuca qaarada yurub ee Opta:
Goolhaye: Jaaskelainen - Goolhayahaan ayaan shabaqiisa laga soo taaban, waxa uu badbaadiyay sagaal fursadood oo qaali ah, goolhayenimadiisa waxa ay aheyd 100% mid hubaal ah.
Daafac Midid: Adriano - Daafac ahaan shabaqiisa waxa uu ka ilaaliyay in la soo taabto, waxa uu kooxdiisa Barcelona ku hogaamiyay guul 1-0 ah oo ay ka gaareen Valencia, waxaana uu badbaadiyay afar fursadood oo weerar ah oo kooxdiisa lagu soo qaaday.
Daafac dhexe: Papadopoulos - Kooxdiisa Schalke waxa uu u dhaliyay hal hool, waxa uu badbaadiyay 12 fursadood oo weerar ah oo kooxdiisa lagu qaaday, waxa uu block-gareeyay seddex karoos.
Daafac dhexe: Aurellien Chedjou: Waxa uu kooxdiisa Lille u dhaliyay gool kulankii PSG, waxa uu ku guuleystay 73% kubadihii ay ciyaaryahano kale ku dagaalameen, waxa uu sameeyay hal taakal oo fiican oo uu ku galay ciyaaryahan goolka u furnaa.
Daafac bidix: Salvatore Masiello: Kooxdiisa Torino ayuu ka caawiyay inaan shabaqa laga soo taaban, waxa uu caawiye ka ahaa hal gool, waxaana uu ku guuleystay 86% taakaladii uu sameeyay.
Garab Midig: Jefferson Farfan -Seddex gool ayuu caawiye ka ahaa ciyaaryahan kooxda Schalke, waxa uu sameeyay shan karoos iyo koornooyin oo lagu guuleystay, 87% baasaskiisa waxa ay ahaayeen kuwa saxan.
Khad Dhexe: Santi Cazorla - Waxa uu dhaliyay hal gool, waxa uu caawiye ka ahaa gool kale, 88% baasaskiisa waxa ay ahaayeen kuwa saxan.
Khad Dhexe: Thomas Mueller - Labo gool ayuu u dhaliyay Bayern Muncib kulankii Stuttgart, waxa uu isku dayay 6 shuut oo goolka ah, 8 jeer ayuu kubado la dhexmaray daafacyada Stuttgart.
Garab Midig: Szabolcs Huszti - waxa uu uu caawiye ka ahaa afar gool kulankii ay kooxdiisa Hannover la ciyaartay Wolfsburg, waxa uu abuuray sideed fursadood, waxaana uu ku guuleystay todoba taakal.
Weeraryahan: Robin van Persie - Waxa uu dhaliyay seddexleey kulankii Manchester United ay ka badisay Southampton, waxa uu helay 10 shuut oo goolka ah, waxaana uu diilinta ganaaxa ee kooxda Southampton uu kubado ku taabtay 13 jeer.
Weeraryahan: Gaimpaolo Pazzini - Waxa uu dhaliyay seddexleey kulankii ay AC Milan ka badisay Bologna, waxa uu helay 5 shuut oo goolka ah, waxaana uu ku guuleystay hal rigoore.